हाईजिन पासको जाँच र मेरो नेपाली भान्सा घर
४० पृष्ठको यहि किताव अध्ययन गरेको थिएँ मैले हाईजिन
आज दुई चार प्रश्नहरू सोध्नु मन लाग्यो प्रिय मित्रहरूलाई - तपाइँलाई रेस्टुरेन्टमा मःम खान जाँदा कहिलेकाही बासी मःम खान बाध्य पारिएको छ कि नाई ? हाम्रा मिष्ठान्न भण्डारमा राखिएका मिठाई या अन्य तयारी परिकारहरू खानको लागि कत्तिको स्वस्थकर छन् होला ? के कहिल्यै यस विषयमा ध्यान दिनु भएको छ ?
हामीलाई खाना ख्वाउने होटल, मिष्ठान्न भण्डार र रेष्टुँराहरूमा काम गर्ने कामदारहरू खाद्यपदार्थको स्वस्थता, सरसफाई र सुरक्षाप्रति कत्तिको जानकार छन् होला ? अनि साँच्ची, परिकार तयार पारिने भान्छाचाँहि कत्तिको सफा र सुग्घर हुन्छ होला ? वा, यसो भनुँ हामीले रकम तिरेर खाना खाइने ठाउँमा हामीलाई उपलब्ध गराउने खानेकुराहरू स्वस्थकर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो राज्य कत्तिको सचेत छ होला ? मेरो अनुभवले भन्छ - यसप्रति हामी कहिल्यै सचेत भएकै छैनौं । न त यससम्बन्धी ब्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले यस विषयमा आफ्नो दायित्व केहि छ भन्ने नै सम्झन्छन् न त हाम्रो राज्य संयन्त्र नै हामी उपभोक्ताको स्वस्थ खाना खान पाउने अधिकारीप्रति गम्भिरतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न नै सकिरहेको छ, फगत यदाकदा केहि नाटकहरू चाँहि मञ्चन नहुने हैन - कता गुँदपाक पसलमा अनुगमन भो रे अनि सिलबन्दी भो । फगत नाटकहरूमात्र । न नीति छ, न त्यसको कार्यान्वयन नै ।
तर, यहाँ फिनल्याण्ड आएपछि विशेषगरी काम खोज्ने शिलशिलमा एउटा गज्जपको कुरो थाहा भो । होटल, रेष्टुँरा, वेकरी वा (विशाल बजार) सुपर मार्केटमा काम गर्न चाहने ब्यक्तिसँग निशर्त एउटा "Hygiene Pass" भन्ने अनिवार्य जस्तै हुँदोरैछ । अरू त अरू ती होटल र रेष्टुँरामा भाँडा माझ्ने कामका गर्नका लागि समेत यो अनिवार्य नै रहिछ । जसलाई Evira नामक सरकारी खाद्य सुरक्षा निकायले नियमन गर्ने काम गर्दछ । विशेषतः यसले खाद्य सुरक्षाका बारेमा परिक्षा सञ्चालन गर्ने गर्दछ । र, ईच्छुक जो सुकैले यस परिक्षामा सहभागी हुन पाउँछ । यो परिक्षामा निश्चित रकम तिरेपछि सहभागी हुन सकिन्छ । यसमा खाद्य सुरक्षा र स्वस्थता सम्बन्धी ४० प्रश्नहरू हुन्छन् जसमध्ये कम्तिमा पनि ३४ वटा प्रश्नहरूको सहि जवाफ दिनु पर्छ । अनि मात्र त्यो हाईजिन पास प्राप्त गर्न सकिन्छ । र, गत बुधबार मैले यो परीक्षामा सहभागि हुने मौका पाएको थिएँ । यो मेरो इच्छा भन्दा पनि बाध्यता थियो, के थाहा भोली यही हाईजिन पास नहुँदा भाँडा माझ्न पनि नपाईने हो कि फिनल्याण्डको रेष्टुँरा या होटलमा ? त्यसकारण पनि यो परिक्षामा सहभागी हुनु मेरा लागि अनिवार्य थियो । सामेल पनि भएँ र पास पनि !
अहिले मलाई लागेको छ कि, के हामी पनि यस्तै व्यवस्था नेपालमा समेत लागू गर्न सक्दैनौ होला ? वा आवश्यक छ होला कि नाई ? हाम्रा रेष्टुँरा, होटल, मिष्ठान्न भण्डार, क्यान्टिन, क्याफेटेरिया, राजमार्ग छेउमा सञ्चालित भोजनालयमा काम गर्ने मान्छेहरूले पनि यस्तै परीक्षामा सहभागी भइ पास भएपछि मात्र काम गर्नुपर्ने स्थिती हुँदो हो भने, स्थानीय निकायले अस्वस्थ, अखाद्य पदार्थ वा मिसावटयुक्त खाना विक्री गर्नेहरूलाई कठोर कानुनी व्यवस्था अन्तरगत कार्वाही गर्न सक्दो हो त... वाह ! हामी पनि यी फिनिसहरू झैं सुरक्षित र स्वस्थकर खाना खान पाउँदा हौं नी हैं ? खैर, अहिलेलाई सपना देख्ने शिलशिला यत्ति नै !